चाणक्य नीति अनुुसार पुरुषले अरुलाई भुलेर पनि भन्न नहुने यी कुराहरू: | सुदुरपश्चिम खबर
चाणक्य नीति अनुुसार पुरुषले अरुलाई भुलेर पनि भन्न नहुने यी कुराहरू:
उनले जीवनमा जे जति अनुभव सँगाले र जुन नियम बनाए त्यो लोकलाई दिएर अमर भए । चाणक्य शास्त्रका अनुसार पुरुषले गोप्य राख्नुपर्ने यी हुन् ४ कुरा
१.कुनै पुरुषको मनमा दुःख छ भने त्यो कसैसँग अभिव्यक्त गर्न नहुने बताएका छन् ।संसारमा सच्चा हितैषी एकदमै कम हुनाले जुन मानिससँग दुःख अभिव्यक्त गरिन्छ उसैले पिठ्युँपछाडि यसको मजाक उडाउन सक्छ । जसका कारण यसले झन दुःखी बनाउँछ ।
२.चाणक्यले धनको क्षतिबारे कसैलाई भन्न नहुने सुझाएका छन् । यसरी अरूलाई बताउँदा यसले प्रतिष्ठा नष्ट हुन्छ र मानिसहरूले उसको सम्मान गर्न छाड्छन् । मानिसले धन क्षति भएको थाहा पाएमा सम्मानको साटो उपहासको विषय बनाउन थाल्छन् ।
३.पुरुषले आफ्नो घरको भित्री कुरा पनि बाहिर कसैलाई बताउन नहुने चाणक्यले भनेका छन् । विशेषगरी आफ्नी पत्नीको चरित्रका विषयमा अर्कोसँग कुनै पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैन । यसो गर्नाले पुरुषको प्रतिष्ठा र सम्मानको नाश हुन्छ ।
४.चाणक्यले भनेका छन् : जीवनमा मिलेको अपमानलाई कहिल्यै पनि अरूका सामुन्ने चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैन । हुन सक्छ, तपाईं अरूलाई भनेर मनको भावना पोख्न चाहनुहुन्छ तर सुन्ने मानिसले यो कुरा दोस्रो मानिसलाई बतायो भने अपमान झन बढ्न सक्छ । यसकारण अपमानसँग जोडिएका घटना कहिल्यै कसैसँग बताउनु हुँदैन । gnewsnepal.com बाट साभार
यी कारणले महिलाहरु चरम यौन सुखबाट बन्चित हुन्छन! पढेर सेयर गर्नुहोला
आज बुधवार सोच्नै नसकिने गरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैछ कारोबार ? जानकारिको लागि पढेर शेयर गर्नुहोला ।